"Maurice Kamto anoedza kushandisa iyo nyika dzepasi rose kupedza nyota yake yesimba" - Tamban RELAY
HOME » KWEZVISUNGO "Maurice Kamto anoedza kushandisa nyika dzepasi rose kupedza nyota yake yesimba"
Mune forum yakaburitswa pamadziro ake epaFacebook, uyu weChina 16 mai 2019, Jean De Dieu Momo achipomera mutungamiri we MRC kuti anoda kudyara nyonganiso kuti agadzirise chero mutengo musimba. Kuti izvi zviitike, chechipiri musarudzo yemutungamiri wenyika yapfuura, vanoda kuronga zvekare "mafambisirwo erunyararo" anotora kupupurira nharaunda dzepasi rose sekutaurirana kwakaita Minister negurukota rezvemitemo, muchengeti wezvisimbiso.
Maurice Kamto naMomo - Mtg Lebledparle
"Zviripachena kuti parizvino kudenha pachena kweruzhinji rwekudaira kwakanyanya kune vatengi vekunze kwenyika kukumbira rubatsiro rwavo ku" chasement "kune vanhu veCameroon, nekuti, mushure mekubudirira kuedza kuyedza chikamu che Bamileke akangwara uye nyanzvi dzezvehupfumi kuti vatore masimba, Maurice Kamto neboka rake, avo vese vari Bamileke, vari kuyedza kushandisa masangano anovandudza kugutsa nyota yavo isingagoneki yesimba kuburikidza ne "kuchena" kwe08 June 2019 ", anonyora mutungamiri wenyika wenyika wePADDEC.
The Mindel Minjustice inokoka zvizvarwa zvedunhu reWest pakadai Bamileke arege kuwira mune yaanoti "musungo" wakawedzerwa naMaurice Kamto. "Naizvozvo, ndinokurudzira vechidiki vaBamileke kuti vasateerere vanhu ava vanovanyepera uye kuti vashandise simba pazvikonzero zvematongerwo enyika. Nekuti mumakwikwi ekutonga, 100 painogadzika, iyo Bamileke ichave iri 5. 000 kukwikwidza nekuda kwe 13% chete zvinoenderana ne1982's Regional Balance Law. Mutemo wechikamu icho vano ruzivo nekunyanzvi vanodzidzisa hunyanzvi kushandisa kuti vatende kuti vaBamileke vakasarudzika vanoratidza zvinopesana, nekuti kunyangwe vanhu ve100 vakasarudzwa kumakwikwi vese vari Bamileke, pachagara paine 4 900 Bamileke anyadziswa. Uye mamwe madzinza ayo anenge asina mumwe achapandukira Bamileke. Izvi ndizvo zvinowanikwa nevezvematongerwo enyika vanopokana kuti vanyengere vanhu vedu nekutaura kuti vana vavo vane diploma uye havana basa, vachiziva zvizere kuti nyika haishande zvakanyanya kune vemasangano akazvimirira ari pasi pesimba ravo. "Anodaro Lawyer.
Pazasi, mhinduro yakazara yaJean De Dieu Momo kune vashambadziri vekufamba murunyararo June anotevera.
Kupindura kune yeruzhinji tendero yeboka revanhuwo zvavo vanochengetwa mutemo, inoda kupandukira muCameroon
1 - Boka revapikisi vezvematongerwo enyika vanopokana vakatanga 10 mai 2019 yeruzhinji nyowani yekunyomba muCameroon kuburikidza ne "chena" maricho "Mugovera 1er June 2019 uye 08 June 2019 kuJaoundé "Yakachena".
2 - Inofanira kuyeukwa kuti kuratidzwa kwevanhu, runyararo, kwakagadzirwa nemutemo muCameroon sezvo boka iri rinozviona iro rakakodzera mune iri papepa rekuda kutengeserana. Zvisinei, inowira pasi pekukosha kwehutungamiri hwehutungamiri, kuongorora mamiriro acho ezvinhu, sezvinoitika, musati watambidza kana kwete. Kutsigira Zvinongoreva kuti chinhu "Kuratidzwa rugare" hazvikwani kuti varambe sezvo vakadaro agitators pachavo kuziva sezvo vadzidzise vatsigiri vavo kuti aronge bhurigedhi kuwana zviratidzo; iro "anopa nzira kuziva, kusunga uye kupira pakarepo kuti kuchengeteka mauto, munhu ane zviito kuvhiringidza anofamba rugare, sei kuvimbika mumuviri kukudza vanhu kana hurumende uye yega pfuma ".
3 - Zvikonzero zvakapihwa kururamisa "marandhi" avanoronga kubva mutirongo hazvina kusiyana zvakanyanya neizvo zvakavatungamira kuvharirwa kutongwa, kunyangwe kana vakaedza nekuchenjera kubvisa humboo nekuvengana nyika yavo ichangobva kuitika, iyo yakambopinza nyika yedu mumhirizhonga uye nemweya inonetsa, isingazungunuke, isingakanganwiki, kusingagamuchiriki uye kusingaregererwi kupazwa kwemamiriri edu muBrussels, London neWashington. kusatenda kwevakuru vane chekuita nekubvunza kwavo; njodzi yekuve yakanyanya nekuda kwerunyararo rwekuti vagari vemo vanoratidzirwa nemhirizhonga isina kumbobvira yakaenzaniswa neakare uye avo vanoti "vanosarudza kusimudzira" kuti vaise musimba, ivo "mutungamiri wenyika-wakasanangurwa", vanobudirira zvavanoita yakakundikana yapfuura Ndira, kureva kumukira kwakakurumbira, kumuisa musimba. Nekudaro, hazvipukunyuke, kuti nehungwaru, vanhu ava havachaise kune zvavanoda nhasi, vasarudzo vanosimudzira pamberi asi vanogutsikana neizvo zviri pachena, zvinofanirwa kunyengedza pazasi.
4 - Vanoti vanoita zviri pamutemo vachipomera iyo Tsika yekutsika mutemo kana zvisiri pamutemo kuda kuti "kusunungurwa kwePurezidhendi-musarudzo Maurice Kamto kubva kune vatungamiriri vavakabatana ... nevamwe vatungamiriri venyika MRC ... vasina mhosva, zvisiri pamutemo uye vasingamiriri vakasungwa, voiswa mutorongo maererano nerunyararo, kuchena kwachena, 26 Ndira 2019 ". Gweta rinogona sei kuramba panguva ino, kuramba kuremekedza mitemo yenyika yake, pavanenge vachidenha magungano epasi rese mukununura kwake? Zvinokatyamadza.
5 - Vaya vakasungwa vari mumamiriro okusangana ekupandukira zvakanyatsorongwa, zvakarongeka, uye zvakawiriraniswa pamaguta ese makuru eCameroon nemadokero eWestern uye avo kunyorwa kwavo uye vanyori vanyori vava kuzivikanwa kumapurisa, iri mumaoko eruramisiro asina kupedza kuraira maitiro. Saka zviri pamutemo here kuronga mafora kukumbira "kusunungurwa" kwevanhu vari muhusungwa vasati vatongwa vasati vatongwa? Uku hakusati kuchizvidza zvakare kuzvidza kwedu masangano ematare negweta rinotaura zvinoshamisa? Sezvo iye achitonga munzvimbo yemutongi kusiri kwepamutemo kweanodaidzwa kuti anopokana hunhu hwekuvharirwa kwevaya!
5- Kutsvaga kuronga kufora nekunyevera masimba ekutonga kuti tichaenda kupfuura izvo zvakarambidzwa uye nekuzivisa nemaune kuti tichatyora mutemo, zvinoita senge zvakapesana nerunyararo runodzokororwa kakawanda muchirevo. Nekuti, kwete chete vanyori vanoshora masimba ekutonga, asi zvakatonyanya ivo vanotsiva Dare Repamusoro nekushora zvisarudzo zvekutonga ... mumugwagwa. Chokwadi ndechekuti vakasarudza 08 June 2019 zuva rekushandisa yavo "chasement" chirongwa.
6- Zviripachena kuti iko zvino kupandukira kweruzhinji rwekudanwa kwehunyoro kunonyanya kudiwa kuti vatengi vepasi rose kukumbira rubatsiro rwavo ku "chasement" kupfuura vanhu veCameroon, nekuti, mushure mekuedza kusabudirira, kushandisa mukana wechikamu. vaBamileke vane njere nehupfumi vakadzidza kutora masimba, VaMaurice Kamto neboka ravo, avo vese vari Bamileke, vava kuedza kushandisa masangano anowedzerawo kugutsa nyota yavo isingagoneki yesimba kuburikidza ne "kuchena" kwe 08 June 2019.
7- Zvechokwadi, ivo ravo pachena kana chakavigwa vatsigiri pamwoyo dzakawanda masangano, wakati vakakundikana pavanoedza instrumentalization pakati Bamileke rudzi dzakasvikwa munyori chomumwe yakatofanana ichi, vafunge kuti ivo vakazvidzwa uye vanosarurwa, izvo zvisiri izvo zvakashata, ivo vari kuedza kunyengedza mhirizhonga yepasi rose nekushandisa nhema idzodzo. Inofanira kunzi kuti vanobudirira nokuti dzimwe nyika dzakaedza kushandisa UN Security Council kuti ibudise mashoko evasiti vezvematongerwe enyika.
8- Zvechokwadi, Bamiléké haana kuwira mumusungo dzavo uye mukasateerera rantings pamusoro Mr. Kamto pokukumbira insurgency nokuti vanoziva kuti vaizova huru vakundwa kana destabilization wenyika yedu izvo zvisinganzwisisiki vanobatisa hupfumi uye vari pakati pevaki vese vorudzi rwedu. Havakwanisi kuparadza izvo zvavakazvivakira pachavo ne swezi rehuma yavo uye havagoni kupa chikwereti kuna Mr. Kamto mubhizimisi rake rezvemhosva kuti awane simba.
9 - Zvose izvi zvinoratidza kupesana kwekupomerwa kwekuti Bamileke vanobatwa nekutambudzwa muCameroon.
10- Ini handibvumirane zvakanyanya nekunyepedzera uku kwenhema uko mumwe murume weBamileke aishandisa kunyengedza nzanga yenyika nehudiki hwedu nekuzvipikisa kune vamwe kubvira 1960 (The 1960 makore maquis Bami-Bassa- 1990 maguta akafa Anglo-Bami- 2008 mhirizhonga yenzara yakashanduka kuita kupesana nekushandurwa kwebumbiro - 2018 kutenderera kwetontine tontinars-sardinars, vakafemesa vatambi vakafanana vehumambo mune yakazvimiririra shangu yeCameroon mukuyedza kwavo kutora simba nechisimba).
11- Ini koka hama dzangu Bamiléké kuti kuramba nzira iyi shure nemafungiro kuti uderedze kukanda navo kutsiva mamwe madzinza nokuti pfungwa nhamba anoramba zvose okuwedzeredza izvi zvenhema kuti Bamiléké vaizopiwa mumapepanhau muCameroon. Munhu angati sei akaregererwa apo imwe inobata mugove weshumba muCameroon? Nhamba idzi dzakasarudzwa kuti Bamileke ndiyo yakawanda pane imwe neimwe yekubatana kwesimba, ngave Vadzidzisi, Vanachiremba, Engineer, Politicians etc.
12- Iyo nzvimbo inodzora yeWestern Cameroon, iyo yeBamileke iri pachena yakagadziriswa uye yakashongedzwa semamwe matunhu enyika (kunze kweDouala neYaoundé); maererano nehukuru hwayo uye netiweki yemumugwagwa, ine zvakajeka kupfuura maseru eKiromita.
13- MuDouala neJaounde, iyo miviri mikuru kune imwe nyika, Bamileke inonyanya kushandisa mazita ekuremekedza. Pane zvinenge hapana nzvimbo Cameroon, apo Bamileke havasi vanatenzi uye vaipa apo kashoma, anenge zvisingaiti, kuti isiri bamiléké vane munda kumavirazuva-bamiléké.
14- Saka, ndinokurudzira vechidiki veBamileke kuti vasateerere vanhu ava vanoreva nhema uye vanovashandura nokuda kwezvikonzero zvematongerwo enyika ezvematongerwo enyika. Nokuti mumutambo wekutungamirira, apo 100 inzvimbo, Bamileke ichava 5. 000 kukwikwidza chete 13% maererano ne1982's Regional Balance Law. Murairo zvinoenderana nounyanzvi vakatoita muroyi wacho mudzidziri webasa kudavira kuti Bamiléké mumapepanhau zvinoratidza kudaro, nekuti kunyange kana 100 vanhu vakabata makwikwi vose Bamiléké, nguva dzose pachava vasingafari nezvaiitika 4 900 Bamiléké. Uye mamwe madzinza asingazovi nemunhu achapandukira Bamileke. Izvi vaidzvinyirirwa dissident enyika izvi kunyengedza vanhu vedu nokutaura kuti vana vavo vane madhigirii uye havana basa, achiziva kuti hurumende haashandisi kupfuura private nemauto riri pasi kwavo zvizere kudzora ./-
Tenzi MOMO Johane waMwari
Human Rights Lawyer uye Bamileke
- Presidency yeRepublic of Cameroon;
- Munyori Mukuru weUnited Nations;
- Mutungamiri weKomisheni yeAfrica Union;
- Mutungamiri weKomisheni yeEuropean Union;
- Mutungamiri wekutanga weDare Repamusoro reCameroon;
- Chancelleries yakagamuchirwa kuJaoundé.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.lebledparle.com/actu/politique/1107739-jean-de-dieu-momo-maurice-kamto-tente-d-utiliser-la-communaute-internationale-pour-assouvir-sa-soif-de-pouvoir